Erdogan Oo Markale Guuldarro Kala Kulmay Istanbul |
Erdogan Oo Markale Guuldarro Kala Kulmay Istanbul
Xisbiga ka arrimiya Turkiga ee AKP ayaa markale guuldarro kala kulmay doorashada ku celiska ee ka dhacday caasimadda Istanbul.
Musharraxa xisbiga mucaaradka Ekrem Imamoglu, ayey guusha doorashada ku raacday 54% iyada oo codadka intooda badan la tiriyey.
Doorashadi ka dhacday bisha March ee sanadkan oo guul la yaab leh ay ku raacday isla musharraxan, waxaa guushaasi ka soo horjeestay xisbiga AKP ee talada Turkiga haya isaga oo sheegay in doorashada lagu celiyo.
Ra’isal wasaarihi hore Binali Yildirim, ayaa doorashada lagaga guuleystay. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu u hambalyeeyey musharraxa mucradka ee ay guusha raacday Ekrem Imamoglu.
Boggiisa Tweetarkana wuxuu ku qoray madaxweynaha “Ekrem Imamoglu oo ay guusha codbixinta doorashada hordhaca ka soo baxday ku saleysan ay raacday waan ugu hambalyeynayaa.”
Natiijada doorashada Istanbul ayaa lagu tilmamay iney tahay caqabad kale ku soo korodhay siyaasadda Erdogan, isaga oo horay u yiri “Ciddi ku guuleysata Istanbul waxay ku ku guuleystay Turkey”.
Mr Imamoglu oo guusha uu gaaray ka hadlay wuxuu sheegay iney natiijada ay astaan u tahay “billowga cusub” ee caasimadda iyo dalkaba.
“Waxaan Istanbul u fureynaa albaab cusub oo caddaalad, sinnaan iyo jeceyl ku qotoma” ayuu yiri.
Wuxuuna intaa ku daray “Waxaan diyaar u ahay inaan Madaxweyne Erdogan inaan si wanaagsan oo daacadnimo leh kuula shaqeeyo.”
Mr Imamoglu wuxuu doorashada ku hoggaaminayey 775,000 oo cod, tirada codadka uu ka helay doorashada ku celika oo ka sarreyso tii dhacday bisha March wuxuu musharraxa AKP ee la tartamayey uu kag guuleystay 13,000 oo cod.
Madaxweyne Erdogan oo ah madaxweynihi ugu awoodda badnaa ee soo mara Turkiga wakhtgan casriga ah waxay guul darradan ku noqonaysaa arrin uusan fileyn oo u baahan inuu wax ka baddalo siyaasaddiisa caasimadda iyo tan dalkaba.
Natiijada doorashada ayaa tilmaameysa inuu xisbiga talada haya uu qiyaas khaldan ka qaatay doorashada caasimadda Istanbul marka uu ku dhawaaqay in doorashada lagu celiyo.
Xisbiga mucaaradka ee CHP guusha ku raacday magaalada waxay noqoneysaa mid uu uga sii gudbo inuu talada dalka oo dhan sidi uu u hanan lahaa uu u hanqal taago maadaamaa xisbiga talada haya uu kaga guuleystay caasimadda dalka.